विचार गर्नुहोस् ! बिहान ढिलासम्म सुत्नेहरुलाई लाग्छ यस्ता भयानक रोग — Imandarmedia.com
विचार गर्नुहोस् ! बिहान ढिलासम्म सुत्नेहरुलाई लाग्छ यस्ता भयानक रोग
सुतिराख्न कसलाई मन पर्दैन र ? सुत्दा दिमाग तिखो हुन्छ भने शरिरमा दिनभरी काम गर्नका लागि ऊर्जावान् राख्छ । यतिमात्र होइन, पर्याप्त निन्द्राले मोटोपना, मधुमेह, हृदय रोग र समयपूर्व मृत्युको सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
अत्यधिक सुत्दा तपाईंको मस्तिष्कलाई शक्ति प्रभावित हुनसक्ट किनभने यो मस्तिष्कको उमेरको हिसाबले तीब्र रुपमा बुढो बनाउने गर्दछ।
बेवारिसे शिशुलार्इ स्तनपान गराएर बचाएकी प्रहरीको बढुवा